C/kariin guuleed oo cadeeyay in Ahlu Sunna ay tahay garab muhiim oo ka maqan – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa muujiyay in Ahlu Sunna ay tahay garab weyn oo ay u qabaan baahi badan hadii ay yihiin Maamulka Galmudug, balse ay jirto kala feker duwanaansho ku aadan Dhismaha Maamulkaasi.
C/kariin Xuseen Guuleed oo ka hadlaayay Xalay xaflad loogu sameeyay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay inay qirayaan Doorka Ahlu Sunna ee ku aadan Gobolada Dhexe, waxaana uu sheegay Ahlu Sunna inay tahay garab muhiim ah oo ka maqan.
Waxa uu tilmaamay Khilaafka Ahlu Sunna iyo Galmudug u dhaxeeya inay suuragal tahay inay ka faa’iideystaan Ururka Shabaab, waxaana uu ka digay inay arintaasi dhacdo.
“Kala qeybsanaanta noo dhaxeyso anaga iyo Ahlu-sunna waxaa ka faa’ideysan karo Ururka Al Shabaab oo labadeenuba aan dagaal kula wada jirno, marka waxaan u soo jeedin lahaa walaalaheen Ahlu-sunna inaan ka wada shaqeyno danta Shacabka”, ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Ahlu Sunna ayaa horay u sheegtay inaysan diyaar u aheyn wada hadal ay la gasho Maamulka Galmudug ee fadhigiisa uu yahay Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo ka hadlaayay arimaha ku aadan dagaalkii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo, waxa uu sheegay dhawaan in la gaari doono Heshiis rasmi ah oo lagu soo afjaraayo wixii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo.
“Aad ayaan oga xunahay dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ahaa mid aynan ku talo galin labada Maamulba, waxaana oga mahad-celinayaa madaxda Puntland iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed kaalintii ay ka qaateen joojiyo dagaalkaas, heeshiiskii Gaalkacyo dhameystirkiisana dhawaan ayuu dhici doonaa,” ayuu yiri C/kariin Guuleed oo xalay shacab aad u tiro badan kula hadlay xaflad loogu qabtay magaalada Nairobi.
Isbitaalka Degmada Buulo Burde oo dib u hoolgalay